आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख -(यहूदाको पुस्कतको परिचय) – Daily Devotion
यहूदाको पुस्तक आज हामी विश्वासीहरुको निम्ति लेखिएको हो । आजको मण्डली युगमा यो पुस्तक अत्यन्त सान्दर्भिक छ । “प्रेरितको पुस्तक” प्रेरितहरुको कामको विषयमा थियो भने यस पुस्तक भूmटा प्रेरित वा शिक्षकको विषयमा छ । अन्तको समयमा धेरै भूmटा शिक्षक र शिक्षाहरुले मण्डलीलाई भ्रम्याएर धेरैलाई “विश्वासबाट तर्काउनेछ” (१ तिमो. ४ः१) । विनाशकारी भूmटा शिक्षा र शिक्षकहरु (२ पत्र. २ः१) पैदा भएर इसाईहरुको विश्वासमा प्रश्न ल्याइदिन्छ । “उहाँका आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो ?” (२ पत्र. ३ः३) जस्ता भनाईहरुले विश्वासीहरु विश्सासबाट तर्किनेछन् । येशूले भन्नुभयो, “मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेट्टाउनेछ र ” ? यो प्रश्न आज हाम्रो लागि पनि हो, र यस पुस्तक पूर्ण रुपमा अन्तमा हुने झुटा शिक्षकमा केन्द्रित छ ।
१. येशू ख्रीष्टको दास, याकूबको भाइ यहूदाबाट– बोलाइएकाहरु, अर्थात् परमेश्वर पितामा प्रियहरु र येशूको निम्ति ख्रीष्टमा सुरीक्षत राखएकाहरुलाईः
यहूदा भन्नासाथ हामी धोकेबास यहूदा इस्करियोत सम्झन्छौँ । हामी आफ्ना छोराछोरीको नाम पत्रस, यूहन्ना, आदि राख्छौ तर यहूदा राख्दैनौ । तर त्यस बेला यो एक प्रख्यात नाम थियो । मर्कूस ६ः३ अनुसार यहूदा र याकूब दुवै येशूका भाई थिए र उहाँको पुनरुत्थानपछि तिनीहरु प्रथम मण्डलीका खम्बाहरु भए । यरुशलेम मण्डलीको प्रमुख र याकूबको पुस्तकको लेखक यिनै प्रभुका भाई याकूब थिए (गला. १ः१९) । यहूदा र याकूब बाह्र चेलाहरुमध्येका थिएनन् किनकी सुरुमा तिनीहरुले विश्वास गरेनन् (यूह. ७ः५) । याकूबको पत्रमा विश्वासको परिणामस्वरुप हुने असल कामहरुको विषयमा छ भने यहूदाको पत्रमा दुष्टता वा भूmटको खराब परिणामको विषयमा छ ।
यहाँ “ख्रीष्टको दास” (ग्री. डुलोस्) भनेको सेवक हो (प्रकाश १ः१) । अब “येशू” यहूदाको दाजु नभएर प्रभु अथवा मालिक हुनुहुन्छ । आज हाम्रो जीवनमा पनि उहाँको प्रभुत्व छ कि छैन भनी जाँच गर्नुपर्छ । “बोलाइएकाहरु” भनेको उहाँले सुरुदेखि नै चुन्नुभएकाहरु हो (२ थेस. २ः१३,१४) । उहाँले हामीले चुन्नुभयो (यूह. १५ः१६; ६ः६५) । तपाई र म ख्रीष्टको सन्तान हुनलाई बोलाइएका छौँ । यद्धपि उहाँले धेरैलाई बोलाउनु भए तापनि थोरैले मात्र प्रतिक्रिया दिएका छन् । “प्रिय” भन्नाले उहाँबाट प्रेम पाएकाहरु हुन् । जसले उहाँको वचनलाई प्रेम गर्छ त्यसले उहाँलाई प्रेम गर्छ (यूह. १४ः२३) तर यदि उहाँको वचन हामीमा छैन भने हामी उहाँका प्रिय भएका छैनौँ (यूह. १६ः२७; यूह. १७ः२०, २३) । “सुरक्षित राख्नु” भनेको निरन्तर रुपमा गरिने हेरचाह हो । उदाहरणको रुपमा जसरी एक सिपाहीले भ्mयालखानाका कैदीलाई सक्रिय रुपमा हेरिराख्छ, त्यसरी नै आज पवित्र आत्माले ख्रीष्टमा भएकाहरुलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ । उहाँले हामीलाई वर्तमान पृथ्वीको दुष्टताबाट सुरक्षित राख्नुभएर स्वर्गीय उत्तराधिकारको निम्ति साँच्नुहुन्छ (१ पत्र. १ः४) । परीक्षाको बेलामा पनि उहाँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ (प्रका. ३ः१०) । किनभने ख्रीष्टको आगमनमा हामी सबै दोषरहित हुन आवश्यक छ (१ थेस. ५ः२३) । यसको निम्ति हामी आपैmले आपैmलाई उहाँको प्रेममा राख्न निरन्तर प्रयन्त गर्नुपर्छ (पद. २१) ।
२. कृपा, शान्ति र प्रेम तिमाीहरुमा प्रशस्त हुँदैजाओस् ।
पावलले आफ्नो अभिवादनमा प्राय अनुग्रह शब्द प्रयोग गर्छन, तर यहाँ कृपा भनिएको छ । दण्डको भागेदार ठहरिएकाहरुलाई कृपाको आवश्यक हुन्छ जुन यस पत्रको विषयवस्तुमा पनि मिल्दोजुल्दो छ । आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको कारण परमेश्वर पितामा “शान्ति” मा छौँ । आज हामी इसाईहरुलाई परमेश्वरबाटको विशेष शान्ति छ जुन अन्यसँग छैन । त्यसैकारण जुनसुकै परिस्थतिमा हामी आनन्दित हुन सक्छौँ । “कुनै कुरामा चिन्तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरुका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन” ( फिलि. ४ः६) । आज यदि हामी चिन्तामा छौ भने आफ्नै अविश्वासको कारणले पो हो कि ? अविश्वास पनि एक पाप हो ।
“प्रेम” शब्द सुरुका तीन पदहरुमा उल्लेख छन् । आज विश्वासीहरुलाई अन्यबाट अलग्याउने विशिष्ट गुण नै प्रेम हो (यूह. १३ः३४,३५) । तर अन्तको मण्डलीको समयमा प्रेम सेलाएर जानेछ । एफिससको मण्डलीलाई प्रभु येशूले प्रेम सेलाएकै कारण हप्काउनु भएको थियो । यस पुस्तकमा पनि यहूदाले परमेश्वरको प्रेममा रहन आज्ञा गरेका छन् (पद. २१) । कृपा माथिबाट आउने कुरा हो, शान्ति भित्र अनुभव गर्ने कुरा हो, र प्रेम बाहिर देखाउने कुरा हो । यो अलौकिक छ कि परमेश्वरबाट आउने यी गुणहरु अलिअलि गर्दै थपिने होइन तर प्रशस्त हुदै जान्छ ।
Next Postझूटा शिक्षा कसरी चिन्ने ? (यहूदा ३-४)